Gentoo: Maka na onweghi ihe zuru oke | NwetaLeta | ChrisADR | Site na Linux
ChrisADR | | Nkesa
Agam ekwuola ihe dị otu puku na otu uru nke Gentoo Linux, dịkwa ka m bụ onye gwara gị ihe ọma, m ga-abụ onye izizi ịgwa gị na ọ bụghị nke ọma, n'ihi na ọ masịrị m nke ahụ ị na-anụ ya site na m karịa na nyocha ndị ahụ si ebe ọzọ ma amaghị ihe m ga-aza 🙂 Na-enweghị oge ọzọ, ka anyị bido:
1 Ndi Gentoo ka nma?
2 Ndị obodo ha enweghị omume enyi?
2.1 Compiler mindset:
3 Ndi Gentoo siri ike?
4 Nsogbu kasịnụ na nsogbu niile
5 Na nchịkọta:
Ndi Gentoo ka nma?
Mba, nke a bụ azịza dị mfe 🙂 enweghị nkesa dị mma ma ọ bụ ka njọ karịa nke ọzọ, nke ọ bụla nwere ụdị ya, amamihe ya, na ụzọ esi aga. O doro anya na a ga-enwe nkà ihe ọmụma nke ga-anabata ụdị ndị ọrụ dị iche iche nke ọma, mana n'ihi nke ahụ, anyị enweghị ike iru otu ma ọ bụ nkesa ọzọ ka mma ma ọ bụ ka njọ. Nke a kwesiri ido anya site na mbido, ekpughere m ụfọdụ elele na yo Echere m na ọ dị mkpa, na ha edugala m ịnọ na Gentoo na-enweghị mkpa ma ọ bụ ọchịchọ ịbanye na nkesa ọzọ.
Ndị obodo ha enweghị omume enyi?
Abughi nke a, na nka bu nkpuru obi ojoo gbasaa n’uwa nile. Gentoo, na obodo ya, bụ ndị nwere ezigbo amamihe, ma n'otu oge ahụ ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike, ndị na-emekọ ihe na mmepe maka Nvidia, Google, Symantec, na otu puku ebe ndị ọzọ, na-emekọ ọnụ na Gentoo. O doro anya na anyị niile nwere ihe anyị ga-eme ma ọ bụrụ na oge ọ bụla ịchọrọ enyemaka ma chee na ha anaghị ege ntị, ị ghaghị ịghọta na anyị niile na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ, mana nke ahụ ekwesịghị ịkụda gị mmụọ, na ntụle. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, ọ nwere ike bụrụ na onye ọzọ nwere ya n'ihu gị (ọ gwụla ma, n'ezie, ị na-emepe ụdị teknụzụ dị egwu nke na ọ nweghị onye ọzọ nọ na mbara ala maara ma ọ bụ nwee ya n'ụzọ zuru oke) ma ọ bụrụ na mmadụ enweela Ya nwee ya, ọ dị 80% ijide n'aka na onye ọzọ edoziworị ya. Nọgide na-agbalị na akwụkwọ, na forums, na Google, otu puku na otu ebe ị nwere ike ịchọta ozi dị mma nke nwere ike inyere gị aka. Na ngwụcha ụbọchị ahụ, ị ​​ga-amụta ọtụtụ ihe site na nyocha gị karịa ihe ị nwere ike ijigide na ngwọta onye ọzọ nyere gị na IRC.
N’oge na-adịghị anya, ezitere m ozi email izizi m na ndepụta izipu ozi Gentoo, dịka na nnukwu ọrụ dị ka Kernel ma ọ bụ Git, Gentoo na-ejikwa ndepụta nzipu ozi iji debe ebe nchekwa ọha nke ihe mepụtara na ihe a kpebiri na obodo. Emere m ihe m weere dị ka ihe dị mma maka obodo ahụ, n'ihi ya ezigara m RFC (Arịrịọ maka Nkwupụta) na echiche m. N'oge na-adịghị anya, buts na alerler malitere ịbịa, dị ka a ga - asị na ọ bụ onye na - emekota ihe C. Na echiche m wee ghara ịdị mma dịka m chere. O doro anya na ndị mmepe kacha nwee ahụmahụ nwere ntọala iji kwuo ya.
Nke a ọ ga - egbochi m izipu RFC ọzọ? Kpamkpam, ihe onye ọ bụla kwesịrị ịghọta bụ na mgbe ị na-arụ ọrụ na obodo ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ, ihe a na-ahụkarị bụ ịdọ aka ná ntị banyere njehie ndị nwere ike (dị ka compilers) n'ihi na mgbe ihe dị mma, ọ dịghị mkpa ikwukwu (dị ka mmemme Linux).
Yabụ ọ bụrụ n'otu oge izipu echiche iji melite obodo ma anaghị anabata ya nke ọma, mụọ amụ, echiche ahụ nwere ike imeziwanye, ma ọ jụrụ Ee e Ha na-emegide onye ahụ, naanị megide echiche ahụ. Na na njedebe nke ụbọchị na-akụziri gị ka ị chee nke ọma ma mara otu esi arụ ụka n'echiche gị, n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere ike ihu a ma, mgbe ahụ ị merielarị ọkara agha ahụ.
Ndi Gentoo siri ike?
Enwere m olileanya na site na ndị ọzọ na ị nwee ike ịhụ na ọ bụghị sayensị thermonuclear (N'ihi na ndị maara banyere nke ahụ gbanwee isiokwu gara aga maka ihe siri ike ọbụna 😛 ). Na ngwụsị nke ụbọchị ọ ga-esiri ike ka ị na-eme ya, ọ bụrụ na ị kpebie ịnwale nhazi nnwale hyper, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ nsogbu karịa ndị ọzọ, mana na njedebe nke ụbọchị ị ga-enwe ike ikwu na ị maara isi okwu karịa 🙂
Nsogbu kasịnụ na nsogbu niile
Nke a bụ nsogbu m hụrụ na oge niile m nọrọ na Gentoo ... enweghị ndị ọrụ, ọ dị ka ụbọchị ndị a, ọ dịghị onye (ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ dị mmadụ ole na ole) ị chọrọ ịmata n'ezie ihe Linux nwere inye, ngwa ngwa dị mfe (nke a bụ ụgha) na ọtụtụ oge anyị na-ahọrọ ịkwụsị iche echiche iji (na-echetara m ọtụtụ ndị ọzọ na sistemụ na m na-agaghị banyere ebe a :) ). Ọ bụ ya mere na ọ bụrụ na ha ahụ na nlereanya Rolling Hapụ adịghị 100%, ma ọ bụ na ụfọdụ ngwugwu ọzọ adịghị n'osisi Ọdụ ụgbọ mmiriKama, inwekwaghị okwukwe, ị ga-enyere ha aka ito eto!
Gentoo nwere ọtụtụ ụzọ ị ga - esi nyere obodo aka, ọ bụ ezie na ihe dị mkpa ga - enwe ike ịsụ / ide / ịgụ Bekee (Ebe ọ bụ na ọ bụ mba ụwa, Bekee bụ asụsụ na-eme ka mmadụ niile dịrị (ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ma ọ dịkarịa ala)) n'ime usoro IRC anyị (Ekwenyeghi m ma ọ bụrụ na e nwere post gbasara IRC, mana m ga-eme nke ọzọ ma emechaa;)
M ga-ahapụ ụdị onyinye ahụ maka ọkwa ọzọ, n'ihi na ha dị ọtụtụ 🙂 na ọ dịghị mkpa ka ị bụrụ ọkachamara mmemme eke, ma ọ bụ bash, iji nwee ike inye aka 🙂 onye na-amaghị nke ọ bụla n'ime ndị a gwara ha asụsụ zuru oke, mana ọ na-adị njikere mgbe niile ịmụ banyere ihe ọhụrụ 🙂
Enwere m ike ịkọ banyere nke a tupu ịhapụ ha n'ime ụwa ndị Juu, ekwenyere m na ịme mkpebi (na Gentoo bụ banyere ikpebi ọtụtụ ihe) ọ dị mkpa ịmara akụkụ abụọ nke mkpụrụ ego ahụ. Enwere m olile anya na mgbe obere oge a, ị nwere ike ịnwe usoro sara mbara nke ihe obodo dị taa, na otu esi etinye aka na nkà ihe ọmụma anyị. Enwere m olileanya ịnwe nkuzi nrụnye n'oge na-adịghị anya, mụ na ya ga-adị ruo ọkwa ọzọ, ekele.
PS: Naanị m ga-etinye njikọ iji nwee ike inyere ndị na-ahụ nke a aka oge mbụ ịghọta ihe kpatara ọkwa dị iche
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Gentoo: Maka na onweghi ihe zuru oke
Anọla m na Linux na-eme mfegharị, amalitere m suseLinux n'oge Windows 98, yabụ ị ga-ahụ na abụghị m nwata. My ọrụ nwere ihe ọ bụla na-eme na Mgbakọ; Mana achọpụtara m ederede gị nke ọma, ma m bu n'obi ịnwa Gentoo nwalee oge m nwere ike ịhapụ.
Daalụ maka isiokwu gị.
Pd, m na-eji Debian ugbu a
I meela Eduardo nke ukwuu 🙂 ọ bụ ihe na-atọ m ụtọ inwe ike isoro gị kerịta obere oge m wee gwa gị maka ihe na-atọ m ezigbo ụtọ 🙂 daalụ maka iwepụta oge iji gụọ ihe nzuzu a maka teknụzụ 🙂 Ekele
Dario Urrutia Melado dijo
ChrisADR, A bụ m onye na - agụ post gị, m bi ebe a na Surco, Las Gardenias. Lima-Peru, ọ nwere ike bụrụ na ị bi nso ebe a, ịgbanwee echiche, abụ m onye nkuzi lara ezumike nká dị afọ 80.
Zaghachi Dario Urrutia Mellado
Agam esonye n’isiokwu a, a na m bi ugbua na Chorrillos by av. Anyanwụ, ịhụ mgbe anyị zukọtara ikwu okwu.
M zitere email ka unu abuo, mee ka m mara 🙂 Ekele
Ahụrụ m usoro gị na Gentoo n'anya. O nwere ike ọ gaghị abụ maka onye ọ bụla mana otu ụbọchị m ga-anwale ya (ikekwe n'oge na-adịghị anya n'ihi mmetụta gị). Otu n'ime ihe kachasị amasị m banyere Arch bụ inweta ngwanrọ, ọkachasị AUR. Ya mere, njiko PKGBUILD ga-abụ nke iji kpokọta gentoo ma si otú ahụ na-agba ọsọ ngwanrọ m na-eji.
Ihe ọzọ m kpọrọ asị banyere mkpokọta bụ oge ọ na-ewe. M na-eji kernel a chịkọtara na njiko ma ọ na-ewe ọtụtụ awa iji chịkọta ya n'ihi na enweghị m CPU dị ike. Mana m na-achọsi ike banyere Gentoo
Yabụ na echere m na nke a ga-abụ ihe na-akpali akpali nke ga-akpọte obi ụtọ Gent na Gentoo, anyị nwekwara ndị njikwa ngwungwu ndị ọzọ niile dịnụ, ndị ọrụ nwere ike ibudata pacman, rpm na ndị ọzọ ... ahụla m na ha emelitere ụdị ndị a n'oge na-adịbeghị anya ọ ga-abụrịrị otu ++ maka ọchịchọ gị iji PKGBUILD nke gị
N'aka nke ọzọ, ikekwe oge nchịkọta bụ n'ihi na ị na - eji eme ihe ... E nwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ime na ime -j4, ọbụnakwa nke ka ukwuu na anam -j9 (nke m na-eji) a na-ewere ya na ọkwa dị oke mkpa, ebe ọ bụ na mgbe ị na-arụ ọrụ eriri 8 n'otu oge, isi gị niile na-arụ ọrụ na ike kachasị oke na oge a na-ebelata nke ukwuu. Enwere mmemme ole na ole chọrọ iji dị ọcha, ma ha abụghị ndị ị ga-ejikwa ụbọchị gị taa na Gentoo 😉 (Naanị m hụrụ ha mgbe m na-etinye Linux na ncha)
I meela nke ukwuu maka edemede gị niile, echere m na ha dị mma ịnwale Gentoo.
Banyere itinye bekee, ọ ga-amasị m ka ndị mmadụ were nke ahụ dịka itinye Windows: azịza ọjọọ mana ndị ọzọ chọrọ ka ha nwee ike ikwurita okwu (otu ihe ahụ bụ ịde Bekee na nzukọ mba ụwa karịa inwe ike idezi Okwu ahụ faịlụ ka inyefe ya onye ọzọ mgbe).
Dịkwa ka n'ihi nke a ọtụtụ n'ime anyị ga-enwerịrị Windows abụọ ma ọ bụ nwee ezigbo Windows ma ọ bụ na anyị nwere Firefox yana Internet Explorer na 2001, ị nwere ike ide ozi ọ bụla n'asụsụ Bekee yana ntụgharị Esperanto ya, nke dị ọnụ ala iji mụta (Duolingo, Lernu.net, Zagreba Metodo, Fernando de Diego, Reta-Vortaro, ...) iji ya mee ihe n'ụzọ abụọ ma si otú a nweta uru ahịa ruo mgbe ha ruru sorpasso (20% bụ ihe mgbochi dị mkpa iji weta ngwọta ka mma ugbu a agbatị).
Cheta na bekee gunyere ikpa oke dabere na obodo (racism), ego (classism) na asusu. Ka anyị wulite ụwa ka mma maka ọgbọ na-abịa abịa.
N'ihi nke ugbu a eziokwu: «dị oké mkpa a chọrọ bụ na-enwe ike ikwu okwu / ide / agụ English»
Achọpụtara m na ihe ị na-akọrọ na-atọ ụtọ, ọ ga-adịkwa mma ịnwe ọtụtụ ndị na-asụ Spanish na Gentoo. Ugbu a enwere ọwa mmiri IRC maka asụsụ niile ha na-eji n'obodo, ọ dị nwute na # gentoo-es ha agaghị ahụ ọtụtụ mmadụ ma e wezụga m na ndị ọrụ di na nwunye 🙂 nke ahụ bụ ihe m na-achọ ịgbanwe ka m wee nwee ike nwee obodo nke ha ga-ekenye Spanish.
Ekwesiri ighota na adighi m elebara anya na ikpa oke na obodo, ma o nweghi ma ahughi m ya, ma n'ezie o di nfe karie inwe ike ikwurita okwu n'otu asusu n'ihi na ichotara ndi mmadu ụwa na Gentoo, enwere site na Canada ruo Japan, gafere Russia na Isreal, na ọtụtụ mba na Europe.
Nke a bụ maapụ ndị mmepe, ị ga - ahụ na enweghi ndị na - asụ Spanish 🙂
Anaghị m ekwu na ọ bụ n’asụsụ Spanish, ọgbakọ ndị si n’akụkụ ụwa niile nọ n’ọgbakọ na-eweta ọgaranya karịa naanị ndị sitere na otu akụkụ ụwa. M na-ekwu na Esperanto dị ka asụsụ mba ụwa na-anọpụ iche, dị mma ma dịkwa ọnụ ala iji mụta, ebe ọ bụ na Bekee na-akpa ókè megide ọtụtụ ụwa ndị ga-amụ asụsụ nke na-ewe ogologo oge dịka ọ na-adịghị agbanwe agbanwe. O doro anya na ọ gaghị ekwe omume ịga site na otu gaa na nke ọzọ, yabụ oge dị mkpa nke ndị na-abụghị ndị na-asụ Bekee ga-eji Bekee na ntụgharị ya gaa Esperanto na ozi niile, nke mere na n'ime afọ X, ụwa ga-enweta ụwa ọzọ n'akụkụ ahụ . Mfu nke akụ na ụba mmadụ na izi ihe na nkuzi / ịmụ asụsụ Bekee nke Ọchịchị, ụlọ ọrụ na ezinụlọ na-emefu na-egbu mgbu mgbe asụsụ Esperanto na-efu na oge na ego ga-abụ ihe na-erughị otu ụzọ n'ụzọ ise n'ihi usoro ya.
Enweela m Gentoo maka afọ 4, enwere m oge ọ greatụ ma ọ dị mwute na m ga-akwụsị iji ya. Enwere m ya dị ka ihe nkesa ruo mgbe m kwagara na CentOS n'ihi na dhcpd na freeradius nyere ọtụtụ nsogbu na sava ahụ ga-amaliteghachi. Ekwesịrị m iwepu ya na laptọọpụ m n'ihi na naanị i3wm na imeghe Chrome, ọnọdụ okpomọkụ ga-agbagbu ruo ogo 80 na Gnome ma ọ bụ ngwa dị iche iche ọ bụ ihe dị ka ogo 65.
Zaghachi Miguel Angel, Fuentes Conesa
mmmm mara mma dị egwu 🙁 mana hey, ọ bụrụ na ọ bụ mmebi nke Gentoo, ma eleghị anya ọ ga-edoziworị, ma ọ bụ na ọ bụghị na ọ ga-abụrịrị obere kernel tweak, ị gbalịrị i copomi usoro Debian iji mee ihe dị iche na nke ị nwere? Ihe dika zcat /etc/config.gz > config_debian; diff /usr/src/linux/.config cofing_debian; Nke ahụ nwere ike inye anyị ntụzi aka banyere ihe dị iche na ha, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ okpomọkụ, ọ nwere ike bụrụ kernel na-echere nkọwa detail olile anya na-enyere aka. Cheers
Edemede dị ezigbo mma, belụsọ maka ụtọasụsụ na nsụpe, nke a ga-eme ka ọ ka mma. Biko ghota onwe gi dika ihe nlebara anya na nkwanye ugwu.
Aka m enweghị ike ikwupụta onwe m dị ka onye ọrụ Linux n'ihi na naanị m awụnyere ya na laptọọpụ iji mụta otu esi eji ya. M ka na-eji Windows 7 maka ihe niile.
N'oge a ana m anwale KDE Neon.
Enwere m olile anya ime ka itu ukwu ahụ gaa na Linux n'oge ọ bụla.
Ya mere, agụrụ m ntakịrị ihe niile gbasara nkesa dị iche iche.
Ndewo Jose Luis,
Ọfọn, ekele maka inye gị oge maka nzaghachi 🙂 dị ka ị ga-aghọta, abụ m ihe ọhụrụ maka ịde blọgụ, na n'eziokwu m na-ede mgbe niile n'usoro na otu esi esi isi m pụta, ma eleghị anya ọ bụ ya mere ihe niile ji dịtụ mixed mana m ga-agba mbọ kapepepepe ka mma (maka nke ahụ ma ọ bụrụ na enweghị ihe kpatara idi adị ma ọ bụ adị).
Echere m na ọ dị mma na ị na-eche ịkwaga Linux 🙂 ọ bụ ụwa nke ihe omimi 🙂 naanị nye onwe gị obere oge iji mata ya ma adala mbà ma ọ bụrụ na oge ụfọdụ ihe anaghị arụ ọrụ ma ọlị , Ọ bụkwa akụkụ nke njem 🙂
Aga m enye gị echiche m dị ala, anọwo m na-eji Linux kemgbe 2005, afọ ndị mbụ m na Linux nọ na-anwale ọtụtụ distro m chọtara na DistroWatch, Ebe ọ bụ na Red Hat 9 (nke bụ distro mbụ m), Debian, Fedora, Mandriva, Suse, Gentoo, Slackware, Linespa, Ubuntu, tinyere ndị ọzọ, ọ masịrị m ịme nke ahụ, ọ masịrị m ịpịpụ ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma, aga m eme ike m niile idozi ya. Taa ọnwa ole na ole mgbe m gbasịrị 30, lụrụ di na nwunye, nwee ezinụlọ, onye nrụpụta weebụ site na ọrụ, obere oge fọdụrụ m raara nye ezinụlọ, ahụla m ihe niile n'ụzọ ọzọ, achọghịzi m ịla n'iyi oge m na-agagharị na distros na obere ịnwa iji dozie nsogbu ndakọrịta, anaghị m agọnahụ na site n'oge ruo n'oge m na-enwe nsogbu na kọmputa nwunye m, nke na-adịghị achọpụta mgbe m gbanwere distro haha, nke ọma, ihe ndị dị ka Ubuntu ma ọ bụ Mint na-adabara m dịka ogwe aka, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na-arụ ọrụ na nke mbụ, na-enweghị agagharị,
I meela nke ukwuu maka okwu gị 🙂 Echere m na ihe ị kwuru banyere ezinụlọ dị mma 🙂 Ana m agbalịrị inye oge m maka ndị m hụrụ n'anya, nke ahụ na-ebute ụzọ na ebe
N'aka nke ọzọ, agaghị m ahụ ya dị ka "ihe efu" nke oge ị na-enyocha akụrụngwa gị yana otu o si arụ ọrụ na ama m ezigbo otu ndị mmadụ na 50/60/70 ha ... ndị na-eche dịka m. Ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya nke ọma, ya na usoro m niile nke posts banyere Gentoo ihe m na-eme bụ ịnwa ịmegharị ọchịchọ gị 🙂 ka emechara, ịmata ihe bụ ihe na-eduga ụfọdụ ịmepụta asụsụ mmemme dị ka PHP, Python, Ruby, Js. .. na ịmata ihe na-eme kernel ahụ na mmepe, na ịmata ihe bụ ihe na - eme ka ị wụnye Ubuntu ma ọ bụ Mint na kọmputa nwunye gị 😉
Ihe doro anya bụ na ọbụlagodi na ị naghị eji gentoo, ọ dị mma na nkesa ndị a dị n'ihi na ị ga-eche na ọbụlagodi na ị na-eji nkesa dị mfe, mmadụ aghaghị ịnakọta na ngwugwu ọnụọgụ abụọ nke ị wụnye na distro gị, na mgbakwunye na akwụkwọ gentoo na archlinux na mgbe ụfọdụ na-arụ ọrụ maka nkesa niile.
N'aka nke ọzọ, ọbụlagodi ndị maara etu esi eme gentoo adịghị ahụ ya dị ka ihe mgbagwoju anya, n'ezie ọtụtụ nsogbu na-abịa n'ihi na onye ọrụ na-eme ihe na-ezighi ezi. nke a na - emekwa na nkesa dị mfe nke ụfọdụ si na windo wee chọọ ime ihe dịka windo ọ na - egosi na ihe ngwọta dị mfe karịa ihe ha na - anwale.
N'otu aka ahụ, onye edemede nke usoro gentoo kwesịrị ịgwa anyị ndị ọrụ ochie bụ ndị nọgidere na-eji gentoo n'ihi na ọ dị ka ọ bụ nkesa maka ndị injinia na-eto eto na n'ezie enwere ndị ọrụ na-abụghị injinia ma ọ bụ nwata.
Ahapụrụ m ebe a njikọ nke ndị nrụpụta ugbu a, dịkwa na taabụ ị nwere ike ịhụ maapụ yana ndị otu niile ewepụla n'ihi otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ. Karịa nke a enweghị m ike ikwu n'ihi na enweghị m ike ikpughe karịa ihe ha chọrọ igosipụta na profaịlụ ha 🙂 Ekele
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị kpọsa ọha mmadụ, m chere na Sabayon bụ ụzọ kachasị mma iji mee ngwa ngwa mata nke ọma.
Na mgbakwunye na iputa na-achịkọta ihe nhazi, enwere ihe ndozi dịka onye nhazi ihe.
Ọ bụ ezie na anaghị m eji ya ogologo oge, kpomkwem n'ihi enweghị ụkọ nkwakọ, na-amasị m nnwale, na-aga dị ka silk iji ya mgbe ị na-arụ ọrụ.
Ndewo Miguel, daalụ maka okwu a 🙂 Dịka m kerịta n'oge ndị ọzọ, ọ masịrị m ịga mgbọrọgwụ, enweghị m ike ikwu ọtụtụ ihe gbasara Sabayon n'ihi na ịgwa eziokwu na anaghị m eji ya, ama m naanị na ọ dị n'ihi na ọ bụ ụdị Manjaro ma ọ bụ Antergos maka Arch.
Amaghị m ihe ị pụtara site na nchịkọta tupu, ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ọnụọgụ abụọ, Gentoo nwekwara nhọrọ ịwụnye nchịkọta dị arọ dị ka ọnụọgụ :)
Ndewo, ọ bụ nnukwu ihe ijuanya ịchọta m onye nwere mmasị iwulite obodo na Spanish gbasara oke nkesa a. Abụ m onye ọrụ Gentoo maka afọ 5, ọ na-ewe m ụbọchị iji kwadebe ihe niile, mana m mụtara ọtụtụ na afọ ojuju nke inweta ya bụ nnukwu afọ ojuju.
Ọ bụ ntakịrị ihe nhụjuanya ịchịkọta dịka mmemme dị, (laptọọpụ m ka bụ Core2Duo), ekwesịrị m ikwu na m na-ejikarị eme ya.
Ugbu a, m na-eji Debian dị ka ihe mmepe na kọmputa nkeonwe, anaghị m achịkwa otu ụbọchị ịlaghachi na Gentoo.